नेहा र रोहनप्रीतको विवाहको कार्ड सार्वजनिक, कहिले हुँदैछ विवाह ? – Online Saptarangi
एजेन्सी । गायीका नेहा कक्कड़ र रोहनप्रीत सिंहको विवाहको रहस्य खुलेको छ । अहिले सम्म उनीहरुको विवाहका बारेमा अनेक अड्कल गरिएको थियो । तर नेहाले सामाजिक सञ्जालमा विवाहको कार्ड सार्वजनिक गरेकी छन् । शुरुआती समयमा प्रचार स्टन्ट जस्तो देखिएको यो समाचार अब भने पुष्टि हुँदैछ । वास्तवमै नेहा र रोहनले विवाह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेहाको फ्यान क्लबले दुबैको विवाहको वेडिंग कार्ड सोशल मीडियामा साझेदारी गरेको छ। फोटोमा यो स्पष्ट देखिन्छ कि नेहा र रोहनप्रीत २६ अक्टुबरमा पंजाबमा विवाह गर्दैछन् ।
नेहा कक्कड़ले सोशल मीडियामा लगातार संकेत दिइरहेकी थिइन् । तर यसवारे उनले अझै पनि कुनै प्रतिकृया भने जनाएकी छैनन् । कार्ड मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भएको कार्डले उनीहरुको विवाहका बारेमा गरिएको अड्कल अब सकिएको छ ।
धेरै समयदेखि नेहा र रोहनप्रीतको सम्बन्धको बारेमा चर्चा भएको थियो। पहिले भनिएको थियो कि ती दुबैको गीत आउँदैछ र यी फोटोहरू साझा प्रचारको हिस्सा हो। केही बलिउड सेलिब्रेटीहरूले पनि नेहालाई प्रश्न सोधेका थिए कि विवाह हुनेवाला छ कि यो केवल रमाईलो हो भनेर। विशाल डडलानीले नेहालाई यस्तै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले सोधेका थिए, वास्तवमै विवाहका लागि लुगा सिलाउनु पर्छ की ? अब यस बीचमा दुबैको विवाहको कार्ड सोशल मीडियामा भाइरल भएको छ। फ्यानले दुबैलाई बधाई दिन सुरू गरेका छन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **